ထမင်းစားပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အန္တရာယ် (၈)ရပ် – ရှအေလငျး
ထမင်စားပြီးနောက် အချိုပွဲ သစ်သီး စားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်နေကြပါသည်။ အမှန် အားဖြင့် ထမင်းစား ပြီးပြီးချင်း သစ်သီးစားခြင်းက လေပွစေပြီး၊ အစာအိမ် ကို ဘေးဥပါသ်ဖြစ်စေ၏။ ထို့ ကြောင့် ထမင်းစားပြီး အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့်ကြာမှ သာ သစ်သီး စားသင့်သည်။ (ကျမ္မာရေး အမြင် ရှိသော ဟိုတယ်ကြီးများနှင့် စားသောက်ဆိုင် အချို့့တွင် သစ်သီးအစား၊ ဥပမာ … ဌက်ပျောသီးပေါင်း (သို့ မဟုတ်) ရွှေဖရုံသီးပေါင်း စသည့် တို့ ကို အချိုပွဲ အဖြစ်တည်ခင်း ဧည့်ခံလာကြသည်)
ရှေး လူကြီးမျာက “ထမင်းစားပြီး အချိုစား၊ ခြေလှမ်း ၂၀၀ သွား” ဟု အဆို ရှိခဲ့ကြလေ၏။ ထို အဆိုမှာ တက် တက် စင် မှားယွင်းနေ ကြောင်း ယနေ့ ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက အတည်ပြုထားကြသည်။အကြောင်းရင်း မှာ …. ထမင်း စားပြီးချင်း ခပ် သွက်သွက် လမ်းလျှောက်ခြင်း က ဗိုက်အောင့်စေတတ်ပြီး၊ထမင်း ဟင်း ထဲမှပါဝင်သော အာဟာရ စုပ်ယူရန် အတွက် အစာချေ စံနစ်ကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ် စေ တတ် သည်။ (ထမင်းစားပြီး ငြိမ်ငြိမ် ထိုင်နေရမည် ဟု မဆိုလိုပါ) ကျန်းမာရေး နဲ့ညီညွတ်စေဖို့ အတွက် ထမင်းစားပြီး ပါက အနည်းဆုံး ၁၅-မိနစ်ခန့်မတ်တပ် ရပ်နေပါ (သို့ မဟုတ်) ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်လမ်းလျှောက်ပါ။
အားကစား မလုပ်ခင် အနည်းဆုံး နာရီဝက် မှ အများဆုံး ၂-နာရီ ခန့် ကြိုတင်၍ ထမင်းစားထား ပါ။ သို့ မဟုတ် ပါက၊ အကြော ဆွဲခြင်း (သို့ မဟုတ်) ရုတ်တရက်နှလုံးခုန် ရပ်တန့် ခြင်း (သို့ မဟုတ်) အသက်သေစေနိုင်သည်။ Credit: (ဆောင်းပါးရှင်…ပေါက်ပေါက်၏ ဆောင်းပါးအား ကူးယူမျှဝေပါသည်) ​လေးစားစွာဖြင့်​ Sein Minn Tha Mee
ထမငျစားပွီးနောကျ အခြိုပှဲ သဈသီး စားခွငျးသညျ မှားယှငျးသော အစဉျအလာ တဈခုဖွဈနကွေပါသညျ။ အမှနျ အားဖွငျ့ ထမငျးစား ပွီးပွီးခငျြး သဈသီးစားခွငျးက လပှေစပွေီး၊ အစာအိမျ ကို ဘေးဥပါသျဖွဈစေ၏။ ထို့ ကွောငျ့ ထမငျးစားပွီး အနညျးဆုံး နာရီဝကျခနျ့ကွာမှ သာ သဈသီး စားသငျ့သညျ။ (ကမ်ြမာရေး အမွငျ ရှိသော ဟိုတယျကွီးမြားနှငျ့ စားသောကျဆိုငျ အခြို့့တှငျ သဈသီးအစား၊ ဥပမာ … ဌကျပြောသီးပေါငျး (သို့ မဟုတျ) ရှဖေရုံသီးပေါငျး စသညျ့ တို့ ကို အခြိုပှဲ အဖွဈတညျခငျး ဧညျ့ခံလာကွသညျ)
လ်ဘကျရညျ အခြိုခွောကျ ထဲတှငျ အကျဆဈဓာတျ အမွောကျအမြား ပါရှိကွပရော၊ ၄ငျးတို့ က ထမငျး ဟငျးထဲ တှငျ ပါရှိသညျ့ ပရိုတငျး မြားကို အနှောငျ့ အယှကျပွုကာ အစာခဖြေကျြမှု ကိုလညျး ဟနျ့ တားစပေါသညျ။
ထမငျး စားပွီးပွီးခငျြး ခါးပတျကွိုး (သို့ မဟုတျ) ပုဆိုး၊ လုံခညျြလြော့ဝတျခွငျး က အူသိမျ အူမ တို့ ကို လိမျခေါကျ ၍ အူလမျးကွောငျး ပိတျဆို့ စပေါသညျ။
(၅) ရေ မခြိုးပါနှငျ့။
ထမငျးစားပွီးနောကျ ရခြေိုးခွငျး သညျ လကျ/ခွထေောကျနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးရှိ သှေး လညျပတျစီးဆငျး မှု တိုးပှားလာပွီး၊ အစာအိမျ တဝိုကျ သှေးလညျပတျ စီးဆငျးမှု လြော့ကြ လာသောကွောငျ့ အစာ အိမျကောငျး စှာ အလုပျ မလုပျနျိုငျတော့ပေ။
(၆) သှကျသှကျ လမျး မလြှောကျပါနှငျ့။
ရှေး လူကွီးမြာက “ထမငျးစားပွီး အခြိုစား၊ ခွလှေမျး ၂၀၀ သှား” ဟု အဆို ရှိခဲ့ကွလေ၏။ ထို အဆိုမှာ တကျ တကျ စငျ မှားယှငျးနေ ကွောငျး ယနေ့ ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျ မြားက အတညျပွုထားကွသညျ။အကွောငျးရငျး မှာ …. ထမငျး စားပွီးခငျြး ခပျ သှကျသှကျ လမျးလြှောကျခွငျး က ဗိုကျအောငျ့စတေတျပွီး၊ထမငျး ဟငျး ထဲမှပါဝငျသော အာဟာရ စုပျယူရနျ အတှကျ အစာခြေ စံနဈကို အနှောငျ့ အယှကျဖွဈ စေ တတျ သညျ။ (ထမငျးစားပွီး ငွိမျငွိမျ ထိုငျနရေမညျ ဟု မဆိုလိုပါ) ကနျြးမာရေး နဲ့ညီညှတျစဖေို့ အတှကျ ထမငျးစားပွီး ပါက အနညျးဆုံး ၁၅-မိနဈခနျ့မတျတပျ ရပျနပေါ (သို့ မဟုတျ) ဖွညျးဖွညျး မှနျမှနျလမျးလြှောကျပါ။
ထမငျးစားပွီး ခကျြခငျြး လှဲအိပျခွငျးသညျ အစာကောငျးစှာ မကညြေကျစတေော့ဘဲ၊ အစာအိမျရောဂါဖွဈစေ သညျ့ပွငျ၊ အူ မြားကို ကူးစကျရောဂါပိုး ၀ငျစသေညျ။
(၈) အားကစား မလုပျပါနှငျ့။
အားကစား မလုပျခငျ အနညျးဆုံး နာရီဝကျ မှ အမြားဆုံး ၂-နာရီ ခနျ့ ကွိုတငျ၍ ထမငျးစားထား ပါ။ သို့ မဟုတျ ပါက၊ အကွော ဆှဲခွငျး (သို့ မဟုတျ) ရုတျတရကျနှလုံးခုနျ ရပျတနျ့ ခွငျး (သို့ မဟုတျ) အသကျသစေနေိုငျသညျ။ Credit: (ဆောငျးပါးရှငျ…ပေါကျပေါကျ၏ ဆောငျးပါးအား ကူးယူမြှဝပေါသညျ) ​လေးစားစှာဖွငျ့​ Sein Minn Tha Mee
ဆီးချိုဖြစ်​တာ… နှစ်​၂၀ ရှိပြီဖြစ်​တဲ့ …အ​မေ​​ပျောက်​တဲ့အတွက်​​ ..​ဆေးနည်းဒါနပြုတာပါ။
အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့သူ ပြောပြတဲ့ အလောင်းတော် ကဿပဘုရားဖူးယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ရပ်ဆိုး
ကြားသိရသူတိုင်း ကြက်သီးများတောင် ထသွားမိစေတဲ့ ကျောက်ဆည်မြို့ ဥယျာဉ်ရွာက...
သမီးလေးအတွက် အရှက်ကွဲ ခံခဲ့တဲ့အဖေ
ရှားရှားပါးပါး နားထောင်ရခဲလှတဲ့ တင်ဇာမော်ရဲ့ မြန်မာသံသီဆိုမှုကြောင့် ပရိသတ်တွေ...
ချစ်ဖေကြီးလက်ပေါ်မှာ မျက်နှာစူပုတ်ပုတ်လေးနဲ့ စိတ်ကောက်နေတဲ့...